September 2020 - The Moon MM
အလှူရှင်တွေစုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့ထဲကနေ ထောပတ်ထမင်း ပွဲရေ (၂၂၃)ပွဲကို ရွာသာကြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ
September 30, 2020 by Wai Lu
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ညီနန္ဒကတော့ သူရောင်းချနေတဲ့ ထောပတ်ထမင်းတွေကို အလှူရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Covid -19 ကာကွယ်ကုသရေးဆေးရုံတွေ၊ Q စင်တာတွေမှာ လိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေခဲ့တာ ပရိသတ်တွေ သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ညီနန္ဒက မတည်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး စေတနာရှင်တွေက တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြတာကို ညီနန္ဒက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ ညီနန္ဒက သူနဲ့ သူ့ရဲ့အလှူရှင်တွေစုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့ထဲကနေ ထောပတ်ထမင်း ပွဲရေ (၂၂၃)ပွဲကို ရွာသာကြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းနေခဲ့ပါတယ်။ ညီနန္ဒကတော့ ထောပတ်ထမင်းတွေ သွားရောက်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ချိန်တိုင်းမှာ အလှူရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေသာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် မှတ်တမ်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ Live လွှင့်ပြီး အမြဲတမ်းမျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းနေတဲ့အကြောင်းကို သူ့နဲ့ သူ့ရဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့ စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးအလှူလေးအဖြစ်သွားရောက်လှူဒါန်းတာဖြစ်ကြောင်း Live လွှင့်မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ညီနန္ဒနဲ့ သူ့ရဲ့အလှူရှင်တွေ စုပေါင်းလှူဒါန်းနဲ့ အလှူလေးကို … Read more
“ပြည်သူနဲ့အတူလှူကြမယ်”ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အတူ တောင်ဥက္ကလာဆေးရုံကြီးတွင်လိုအပ်လျက်ရှိသော Infusion pump(3)လုံးကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဂျွန်လွင်
လတ်တလောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid 19ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးတွေဖြစ်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကအစွမ်းကုန်ကူညီနေကြသလို ပြည်သူတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေဦးစီးပြီးဖွဲ့ထားတဲ့” ပြည်သူနဲ့အတူလှူကြမယ် “ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးကလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ဂျွန်လွင်က”ပြည်သူနဲ့အတူလှူကြမယ်”အစီအစဉ်မှ ကျန်ရှိနေသေးသောအလှူငွေ37,800,000 ကျပ်အနက် တောင်ဥက္ကလာဆေးရုံကြီးအတွက်အထူးလိုအပ်လျက်ရှိသော Infusion pump3လုံး(တန်ဖိုးငွေကျပ် 1,950,000 ကျပ်)ကိုအလှူရှင်ပြည်သူများအနုပညာရှင်များအားလုံးကိုယ်စားလှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသောအလှူငွေ35,850,000 kyats ကိုလည်း လိုအပ်သောနေရာများတွင် သွားရောက်လှူဒါန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ အဆိုပါအလှူအကြောင်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသာဓုခေါ်လို့ရအောင် ဂျွန်လွင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:John Lwin Zawgyi “ျပည္သူနဲ႔အတူလႉၾကမယ္”ဆိုတဲ့အစီအစဥ္နဲ႔အတူ ေတာင္ဥကၠလာေဆး႐ုံႀကီးတြင္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Infusion pump(3)လုံးကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ဂြၽန္လြင္ လတ္တေလာမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ Covid 19 ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႉးေတြျဖစ္တဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြကအစြမ္းကုန္ကူညီေနၾကသလို ျပည္သူေတြနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေနပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အႏုပညာရွင္ေတြဦးစီးၿပီးဖြဲ႕ထားတဲ့ ” ျပည္သူနဲ႔အတူလႉၾကမယ္ “ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ေလးကလည္းလိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ဂြၽန္လြင္က”ျပည္သူနဲ႔အတူလႉၾကမယ္”အစီအစဥ္မွ က်န္ရွိေနေသးေသာအလႉေငြ 37,800,000 က်ပ္အနက္ေတာင္ဥကၠလာေဆး႐ုံႀကီးအတြက္အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Infusion pump 3လုံး(တန္ဖိုးေငြက်ပ္1,950,000 က်ပ္)ကိုအလႉရွင္ျပည္သူမ်ားအႏုပညာရွင္မ်ားအားလုံးကိုယ္စားလႉဒါန္းေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသာအလႉေငြ35,850,000 … Read more
လူတိုင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းက အစစ်အစစ်တွေနဲ့အထှာကျနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ အိချောပို
စူစူလို့ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ အိချောပိုကတော့ပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးကောက်ကြောင်းလှတဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကိုလည်းတစ်ခဲနက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့အိချောပိုက သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူတိုင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းကအစစ်အစစ်တွေနဲ့အထှာကျနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ အိချောပိုက”လူတိုင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းက အစစ်အစစ်တွေနဲ့အထှာကျနေဖို့လိုတယ် ချစ်သူရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်အသိမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စစချင်းတွေ့ဆုံမှုမှာ အရှိအရှိတိုင်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲလိုမှမဟုတ်ရင်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ သူကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဂရုမစိုက်တော့ဘူး ပြောင်းလဲသွားပြီဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတွေမှာအမြင်ကလည်း လိုမှလာခေါ်တယ်တို့ဘာတို့နဲ့မလိုလားအပ်တာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်.အဲဒါကြောင့်အစကတည်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာဟန်ဆောင်မှုမပါတဲ့အစစ်အစစ်တွေနဲ့ပဲ အထှာကျကျဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ မေတ္တာဆိုတာတကူးတကလိုက်ရှာနေစရာလိုတော့မယ်မထင်”ဆိုပြီးရေးသားကာ သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကိုချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အိချောပိုရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:Ei Chaw Po – စူစူ Zawgyi လူတိုင္းရဲ႕ေတြ႕ဆုံမႈတိုင္းက အစစ္အစစ္ေတြနဲ႔အထွာက်ေနဖို႔ပဲလိုတယ္ဆိုတဲ့ အိေခ်ာပို စူစူလို႔ပရိသတ္ေတြကခ်စ္စႏိုးေခၚတဲ့ အိေခ်ာပိုကေတာ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္အႏုပညာရွင္ေတြထဲတစ္ေယာက္အပါအဝင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ဆြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီးေကာက္ေၾကာင္းလွတဲ့အမိုက္စားေဘာ္ဒီေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ပုရိသေတြရဲ႕အားေပးဝန္းရံမႈကိုလည္းတစ္ခဲနက္ရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့အိေခ်ာပိုက သူမရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူလူတိုင္းရဲ႕ေတြ႕ဆုံမႈတိုင္းက အစစ္အစစ္ေတြနဲ႔အထွာက်ေနဖို႔ပဲလိုတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ အိေခ်ာပိုက”လူတိုင္းရဲ႕ေတြ႕ဆုံမႈတိုင္းက အစစ္အစစ္ေတြနဲ႔အထွာက်ေနဖို႔လိုတယ္ ခ်စ္သူရည္းစားပဲျဖစ္ျဖစ္ အသိမိတ္ေဆြပဲျဖစ္ျဖစ္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စစခ်င္းေတြ႕ဆုံမႈမွာ အရွိအရွိတိုင္းျဖစ္ေနဖို႔လိုတယ္ အဲလိုမွမဟုတ္ရင္အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါမွာ သူကအရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘူး ေျပာင္းလဲသြားၿပီဒါမွမဟုတ္မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းေတြမွာအျမင္ကလည္း လိုမွလာေခၚတယ္တို႔ဘာတို႔နဲ႔မလိုလားအပ္တာေတြျဖစ္လာတတ္တယ္.အဲဒါေၾကာင့္အစကတည္းက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ ဟန္ေဆာင္မႈမပါတဲ့အစစ္အစစ္ေတြနဲ႔ပဲ အထွာက်က်ျဖတ္သန္းမယ္ဆိုရင္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတဲ့ ေမတၱာဆိုတာတကူးတကလိုက္ရွာေနစရာလိုေတာ့မယ္မထင္”ဆိုၿပီးေရးသားကာ သူမရဲ႕အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကိုခ်ျပလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ အိေခ်ာပိုရဲ႕အမိုက္စားပုံရိပ္ေလးေတြကို … Read more
မိုမိုမြင့်အောင်ရဲ့မိခင်ကြီး နောက်ဆုံးခရီးမှာ တာဝန်မကျေသလိုခံစားရကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောဆိုလာတဲ့ ရန်အောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၅) မိနစ်မှာ အကယ်ဒမီများရှင်မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ မိခင်ကြီးဆုံးပါးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက်(၉၉) နှစ်မှာ လူကြီးရောဂါနဲ့ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပြီး အခုလို ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ အနုပညာမောင်နှမဖြစ်သူ မမို့ရဲ့အမေနောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါမပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အပေါ် ရန်အောင်ကတော့ ဝမ်းနည်းကြောင်းစကား ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ” ချစ်ရတဲ့အစ်မ မမို့(မို့မို့မြင့်အောင်)ရဲ့မွေးမိခင်ကြီး ယနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၅)မိနစ်မှာ လူကြီးရောဂါနှင့်ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်. ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့၊ ကျွန်တော်က ချစ်တဲ့ မာမီ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်မပို့ရ,မျက်နှာလေးကိုမကြည့်လိုက်ရလို့ ပိုပြီး ခံစားကြေကွဲရပါတယ်မာမီရေ… ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့နီးပါတယ် လမ်းထိပ်တင်၊ ဒါပေမယ့် Covid ကြောင့် ဘယ်မှမသွား/မလာရတော့ ဝတ္တရားမကျေသလိုခံစားရပြန်တယ်.. အသက်(၉၉) နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာမီရေ…. ဒီ(၉၉) နှစ်လုံး သုံးလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အဟောင်းကိုစွန့်ပြီး ကောင်းရာဘုံဘဝသစ်မှာ ခန္ဓာသစ်နဲ့ သုခချမ်းသာပြည့်စုံရရှိပါစေခင်ဗျာ” ဆိုပြီး … Read more
ဘုရားတရားလည်းလုပ်ပြီးလိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ သားလေးကိုကြည့်ကာပီတိဖြစ်နေတဲ့ မယ်လိုဒီ
မယ်လိုဒီကတော့အနုပညာလောကမှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အောင် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ဟာကွက်မရှိအောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီဆုကိုထိုက်တန်စွာနဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့မယ်လိုဒီဟာ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏတာရပ်နားပြီး သားလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သားလေးသိဒ္ဓီစစ်ကလည်း မိဘအပေါ်သိတတ်လိမ္မာတဲ့သားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဘုရားတရားကိုလည်းမိခင်အတူပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ဆွမ်းကပ်နေပြီး မယ်လိုဒီကတော့လိမ္မာရေးခြားရှိလှတဲ့သားလေးကိုကြည့်ကာပျော်နေကြောင်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသားလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဆွမ်းကပ်နေတဲ့ မယ်လိုဒီသားလေးသိဒ္ဓီစစ်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ မယ်လိုဒီက”ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကပ်လှူ အပြစ်ဝန်ချအေးချမ်းပါစေ”ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:Melody Myo Zawgyi ဘုရားတရားလည္းလုပ္ျပီးလိမၼာေရးျခားရွိတဲ့ သားေလးကိုၾကည့္ကာပီတိျဖစ္ေနတဲ့ မယ္လိုဒီ မယ္လိုဒီကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေအာင္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုရရွိခဲ့တဲ့မင္းသမီးတစ္လက္ပဲဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို ဟာကြက္မရွိေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အေကာင္းဆုံးအကယ္ဒမီဆုကိုထိုက္တန္စြာနဲ႔သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့မယ္လိုဒီဟာ ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုခဏတာရပ္နားၿပီး သားေလးနဲ႔အတူေပ်ာ္႐ႊင္စရာအခ်ိန္ေလးကိုဖန္တီးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕သားေလးသိဒၶီစစ္ကလည္း မိဘအေပၚသိတတ္လိမၼာတဲ့သားေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို ဘာသာေရးကိုလည္းမိခင္အတူျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားသူကိုယ္တိုင္ဆြမ္းကပ္ေနၿပီး မယ္လိုဒီကေတာ့လိမာၼေရးျခားရွိလွတဲ့သားေလးကိုၾကည့္ကာေပ်ာ္ေနေၾကာင္း သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာသားေလးရဲ႕ပုံရိပ္ေတြနဲ႔အတူေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုကိုယ္တိုင္ဆြမ္းကပ္ေနတဲ့ မယ္လိုဒီသားေလးသိဒၶီစစ္ရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကိုေတာ့ မယ္လိုဒီက”ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကပ္လႉ အျပစ္ဝန္ခ်ေအးခ်မ္းပါေစ”ဆိုတဲ့စာသားနဲ႕အတူေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်မို့ မနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်ကိုမျှဝေလာတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံကိုလက်ခံရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့သူမဟာ အေးချမ်းသာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို သားလေးတစ်ယောက်သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူအေးအေးချမ်းချမ်းလေးတည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းဟာ မိသားစုအတွက်အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုစားရင်း အနုပညာအလုပ်တွေကိုအနည်းငယ်သာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကမနက်မိုးလင်းလာတာတဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုယခုလိုပဲဝေမျှလာခဲ့ပါတယ်။”ဆံပင်တွေနားထင်မွေးတွေလာဆွဲလို့နာလွန်းလို့ခေါင်းခြုံအိပ်တာကိုစိတ်ဆိုးပြီးအားကြီးနဲ့နှာခေါင်းကိုလာကုတ်တယ်ဗြဲ။ ညကလဲ၃နာရီမှအိပ်တယ်နော်သူ။ မနက်မနက်ဆိုသားကတက်ဖိလိုက်သမီးကဆံပင်ဆွဲလိုက်နဲ့ချာချာလည်နေတဲ့သူတို့ပြုသမျှခံနေရတယ် ပြီးတော့လဲမာမားလို့ခေါ်တာနဲ့အရည်ပျော်ရတာပဲ”ဆိုပြီး ရေးသားကာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:Thinzar Nwewin Zawgyi ကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္မို႔ မနက္မိုးလင္းလာတာနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ သူမရဲ႕အျဖစ္ကိုမွ်ေဝလာတဲ့ သဥၨာႏြယ္ဝင္း သဥၨာႏြယ္ဝင္းကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္အားေပးမႈကိုအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ရရွိထားတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ဗီဒီယိုႏွင့္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာမွာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးဝန္းရံကိုလက္ခံရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့သူမဟာ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့မိသားစုဘဝေလးကို သားေလးတစ္ေယာက္သမီးေလးတစ္ေယာက္နဲ႔အတူေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေလးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သဥၨာႏြယ္ဝင္းဟာ မိသားစုအတြက္အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳစားရင္း အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုအနည္းငယ္သာလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ သဥၨာႏြယ္ဝင္းကမနက္မိုးလင္းလာတာတဲ့ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕အျဖစ္ကိုယခုလိုပဲေဝမွ်လာခဲ့ပါတယ္။”ဆံပင္ေတြနားထင္ေမြးေတြလာဆြဲလို႔နာလြန္းလို႔ေခါင္းၿခဳံအိပ္တာကိုစိတ္ဆိုးၿပီးအားႀကီးနဲ႔ႏွာေခါင္းကိုလာကုတ္တယ္ၿဗဲ။ ညကလဲ၃နာရီမွအိပ္တယ္ေနာ္သူ။ မနက္မနက္ဆိုသားကတက္ဖိလိုက္သမီးကဆံပင္ဆြဲလိုက္နဲ႔ခ်ာခ်ာလည္ေနတဲ့သူတို႔ျပဳသမွ်ခံေနရတယ္ ၿပီးေတာ့လဲမာမားလို႔ေခၚတာနဲ႔အရည္ေပ်ာ္ရတာပဲ”ဆိုၿပီး ေရးသားကာေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီနေ့မှာပဲ ဝါရင့်မင်းသမီးကြီး အကယ်ဒမီမို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ မွေးမိခင်ကြီး ဆုံးပါးကွယ်လွန်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝါရင့်မင်းသမီးကြီး အကယ်ဒမီမို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ မွေးမိခင်ကြီးက ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွား ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ ဒီစိတ်မကောင်းစရာ သတင်းလေးကိုတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားရဝေအောင်ကနေ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ “အမ နဲ့ ဘုတ်ဘုတ်ရေ ဖွားမာမီ သတင်းကြားတာ တကယ်ထပ်တူဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဖွားမာမီကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ” လို့ ရဝေအောင်ကသူကိုယ်တိုင်လည်း မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိကြောင်း ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီသတင်းကြောင့် မို့မို့မြင့်အောင်နဲ့ ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် ဝါရင့်မင်းသမီးကြီး အကယ်ဒမီမို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ မွေးမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ နာရေးသတင်းလေးကိုတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကနေ မျှဝေဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ မို့မို့မြင်အောင် ရဲ့မိခင်ကြီးလည်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။ credit-cele zone ZAWGYI ဒီေန့မွာပဲ ဝါရင့္မင္းသမီးႀကီး အကယ္ဒမီမို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ရဲ႕ … Read more
ကိုဗစ်ကာလတွင် အခက်အခဲရှိနေတဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းကို သိန်းတစ်ထောင်လှူပေးခဲ့တဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်ကို ကျေးဇူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဖိုးချစ်
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဖိုးချစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့အသင်းအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိခ် ဘောလုံးအသင်းတွေထဲက နှစ်သင်းကတော့ ပထမရာသီအပြီးမှာပဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက မြန်မာ့ဘောလုံးလောကကို တိုးတက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းကို တည်ထောင်ထားပေမယ့်လည်း လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာ အသင်းရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဦးဇော်ဇော်က လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ “Covid-19 ကာလတွင် အခက်အခဲရှိသော စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းအား Max Energy မှ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ကူညီပေးပါသောကြောင့် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့်တကွ Max Energy မိသားစုအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင် အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ…. ဆထက်ထမ်းပိုး အများအကျိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ…. ကျေးဇူး ဦးဇော်” ဆိုပြီး ဦးဇော်ဇော်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ကတော့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဌတစ်ယောက်ဖြစ်သလို မြန်မာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အရေးကိစ္စမှန်သမျှကို လူအား၊ငွေအားစိုက်ထုတ်ပြီး … Read more
မယ်သီလရှင်စာတိုက်(၂၅)တိုက်ကို ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ၊မုန့်မျိုးစုံ နှင့် Mask များအား သွားရောက်ပို့ဆောင် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်း
ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်စုံတွဲဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့လင်းလင်းတို့က တည်ထောင်ထားတယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေသိကြမှာပါ။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ သမီးလေးတွေနာမည်နဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ထားပြီး လှူဒါန်းမှုမျိုးစုံကိုလုပ်နေခဲ့ကာ အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင် မပြတ်တမ်းအလှူတွေလုပ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လင်းလင်းကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာ “သီလရှင်ကျောင်းများသို့လှူဒါန်းခြင်း သီလရှင်များဆရာကြီး/ဆရာလေးများအနေဖြင့် COVID-19 ကာလအတွင်း ဆွမ်းဆန်ခံခြင်းမပြုလုပ်ရသဖြင့် ဆွမ်းဆန်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို ပြေလည်စေဖို့အတွက် ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Clean Yangon တို့ပူးပေါင်းလှူဒါန်းမည့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ သီလရှင်စာသင်တိုက် (၂၅) တိုက် ယနေ့မှာတော့ မြိုင်သီလ ရှင်ကျောင် း°ကမ်းဇေယျာ သီလရှင်စာသင်တိုက် °ရွှေရတနာ သီလရှင်စာသင်တိုက်°ဓမ္မမဟေသီရွှေနံ့သာ သီလရှင်စာသင်တိုက် °ခေမာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက် °ကေသာရာတီ သီလရှင်ကျောင်း °ရွှေစင်ရတနာ စာသင်တိုက် အား တစ်ကျောင်းလျှင်ကာလတန်ဖိုး (၃) သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်အဖြူ/အနီ၊ ကြက်ဥ၊ ငပိကြော်၊ မုန့်မျိုးစုံ နှင့် … Read more
ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံသို့ အလှူငွေနှင့်PPE ဝတ်စုံ (၃၀)ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မိစန္ဒီ
မိစန္ဒီကတော့ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့လတ်တလောမှာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကို ခဏတာရပ်နားပြီး အိမ်မှာပဲအနားယူနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ သိုသော်လည်းပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်တော့ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ cover songလေးတွေကိုသီဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့မိစန္ဒီကပရိသတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအတွက်သူတတ်နိုင်သလောက်ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံသို့ အလှူငွေတွေနဲ့PPE အစုံ(၃၀)ကိုပါမောက္ခကြီးမှတစ်ဆင့်လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အရင်ကမိစန္ဒီဟာခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ Animal Shelter(တိရစ္ဆာန်ဂေဟာ) လေးတွေကို လှူဒါန်းမယ်စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် Covid-19 second wave ကြောင့်ပြည်သူတွေစီကအကူညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့ Frontliners သူရဲကောင်းတွေကိုသာ လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီအလှူလေးကတော့ မိစန္ဒီနဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတူပေါင်းပြီးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အလှူဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးပဲသာဓုခေါ်လို့ရအောင် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:Closet 834 Zawgyi ပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံသို႔ အလႉေငြနွင့္PPE ၀တ္စုံ(၃၀)ကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ မိစႏၵီ မိစႏၵီကေတာ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့လတ္တေလာမွာ ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ခဏတာရပ္နားၿပီး အိမ္မွာပဲအနားယူေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ သိုေသာ္လည္းပရိသတ္ေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ေတာ့ သူမရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ပုံရိပ္ေတြနဲ႔ cover songေလးေတြကိုသီဆိုၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနတင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့မိစႏၵီကပရိသတ္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္းအတြက္သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံသို႔ အလႉေငြေတြနဲ႔ PPEအစုံ(၃၀)ကိုပါေမာကၡႀကီးမွတစ္ဆင့္လႉဒါန္းေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အရင္ကမိစႏၵီဟာခိုကိုးရာမဲ့ေနတဲ့ … Read more